उपसभामुख बीच अब भिडियो कुराकानी |
उपसभामुख बीच अब भिडियो कुराकानी
प्रकाशित मिति :2019-08-23 15:00:29
ललितपुर । संघीय संसद र प्रदेश संसदका उपसभामुख बीच बिद्युतीय रुपमा सम्बाद शुरू भएको छ । मंगलबार संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका उप सभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र राष्ट्रिता सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले ७ प्रदेशका उपसभामुखसँग भिडियो कन्फ्रेंसिंग गरि अनुभव साटासाट गरे ।
नेपालको संविधानमा संघीय संसद र प्रदेश संसद प्रशासनिक र संचालनको हिसाबले स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको अभ्यास र अनुभव भए पनि प्रदेश संसद संचालनको अनुभव छैन ।
औपचारिक रुपमा अन्तर सम्बन्ध नभए पनि उप-सभामुख र उपाध्यक्षले प्रदेश संसदका उपसभामुख सँग निरन्तर सम्बाद गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भौगोलिक रुपमा दुरी र समय अभावका कारण निरन्तर सम्बाद हुन नसकेको अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेसिङ्गले सम्बाद सहज बनाउने बिश्वास ब्यक्त गरिन्।
संघीय संसद सचिवालयले केन्द्र र प्रदेश तहका संसदबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने उद्देश्यले २०७५ साल भदौ ३ गते पहिलोपटक काठमाडौंमा उपाध्यक्षहरुको भेला गरेको थियो ।
त्यसपछि ३ नम्बर प्रदेश सभाले चितवनमा २०७५ साल मंसिर २९ गते अन्तरप्रदेश सभा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यस प्रकारको सम्बादले प्रदेशसभा संचालनमा संघिय संसद्को अनुभवले सहयोग पुग्ने प्रदेश सभाका उपसभामुखहरुले बिश्वास ब्यक्त गरे।